Intouch Medicare Clinic၊ Din Daeng ဘဏ်ခွဲကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ - intouchmedicare
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ဒင်ဒယ် (Din Deang)ဌာနခွဲမှ လာနိုင်သော နည်းလမ်းနံပတ် (1) BTS အနုစာဝတီချိုင်း (BTS Victory Monument)
BTS အနုစာဝတီချိုင်းဘူတာမှာဆင်းပြီး ထို့နောက် ဆွဲပါချာဆုန်ခေါ့21 (Soi Pracha Songkhro21) ကားမှတ်တိုင်သို့သွားရန် ဘတ်စ်ကား 12, 36 ဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်သည်၊ ကားမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတဲ့နောက်မီတာ 50 ခန့်လမ်းလျှောက်ပါ။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ဆေးခန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ BTS အနုစာဝတီချိုင်းဘူတာမှ ဆေးခန်းနှင့်အကွာအဝေး ၃.၆ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး 15 မိနစ်ခန့်လောက်ကြာမှာဖြစ်ပါသည်
1. BTS အနုစာဝလီချိုင်း (BTS Victory Monument)မှာဆင်းပါ
2. အနုစာဝတီချိုင်းကို သွားဖို့အတွက် ထွက်ပေါက်နံပတ် (3) ကိုရွေးထွက်ပါ
3. ထို့နောက် ဒင်ဒယ်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကားနံပတ် 12, 36 ဖြင့် ဆွဲပါချာဆုန်ခေါ့21 (Soi Pracha Songkhro 21)မှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ
4. ဆွဲပါချာဆုန်ခေါ့21 (Soi Pracha Songkhro 21) ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါ မီတာ ၅၀ လောက်လမ်းဆက်လျှောက်လျှင် ဘယ်ဘက်ရှိဆေးခန်းတွေ့ရှိ့ရလိမ့်မည် လိန်းပိုးစျေး(rainbow)နဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပါ
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း ဒင်ဒယ် (Din Deang)ဌာနခွဲမှ လာနိုင်သော နည်းလမ်းနံပတ် (1) MRT ဟဝေ့ခေါင် (Huai Khwang)
MRT ဟဝေ့ခေါင် (Huai Khwang)ဘူတာမှာဆင်းပြီးနောက် ဆေးခန်းသို့ခရီးဆက်ရန် 36, 36ก သို့ဘတ်စ်ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်(သို့မဟုတ်) မော်တော်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီကိုအသုံးပြုလို့လည်းရပါသည်။ MRT ဟဝေ့ခေါင် (Huai Khwang Station)ဘူတာမှ - ဆေးခန်းနှင့်အကွာအဝေးသည် ၂ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး ၅ မိနစ်ခန့်ကြာချိန်ဖြစ်ပါသည်၊ ဘတ်စ်ကားတော့ ၁၀ မိနစ်ခန့်လောက်ကြာချိန်ဖြစ်သည်
1. MRT ဟဝေ့ခေါင် (Huai Khwang)မှာဆင်းပါ
2. ထွက်ပေါက် နံပတ်3ဖြင့်ရွေးထွက်ပါ
3. MRT ဟဝေ့ခေါင် (Huai Khwang)ဘူတာမှာဆင်းပြီးနောက် ဘူတာရုံရဲ့ရှေ့ထွက်ပေါက်တွင်ရှိသော ဆိုင်ကယ်,တက္ကစီ,သုံးဘီးများကိုငှားနိုင်ပါသည်၊ တနည်းအားဖြင့်သင်သည် Emerald ဟိုတယ်ရှေ့မှ ကားမှတ်တိုင်ဖြင့် ဆေးခန်းသို့သွားနိုင်သည်။
4. ဘတ်စ်ကားဖြင့်သွားလိုပါက ဘူတာမှမီတာ ၃၀၀ အကွာတွင်ရှိသော Emerald ဟိုတယ်ရှေ့တွင်လမ်းလျှောက်ပြီး ဘတ်စ်ကား 36 , 36ก စီးပြီး ဆွဲပါချာဆုန်ခေါ့ 16 (Pracha Songkhro Soi 16) မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရပါ့မည်
5. ဆွဲပါချာဆုန်ခေါ့ 16 (Soi Pracha Songkhro 16) ရောက်ရှိပါက ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိ ဆေးခန်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။